Ajanbi ku ahaanshaha Helsinki - InfoFinland
Magaalooyin > Helsinki > Nolosha Helsinki > Ajanbi ku ahaanshaha Helsinki
La-talinta dadka dalka u soo guuray iyo la-qabsashada
Sahminta hore iyo qorshaha la-qabsashada
Helsinki-info waa goob talo bixineed oo aad ka heli kartid macluumaad ku saabsan adeegyada magaalada Helsinki, fursadaha deegaanka, shaqada iyo waxbarashada. Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa caawimaad haddii aadan aqoon hay’adda ay tahay in aad la xiriirto. Waxaa intaas dheer in Helsinki-info ay bixiso talo bixin dijitaal ah iyadoona sidoo kale kaa caawineysa adiga su’aalaha la xiriira imaanshaha dalka. Helsinki-info waxey khadka telefoonka, fool ka fool ama elekterikaal ahaan ugu adeegtaa luqado badan oo kala duduwan.
telefoon: 09 310 11111, Isniin-Khamiis saacadaha u dhexeeyo 9-16, Jimco saacadda 10-15
Maktabadda dhexe Oodi, cinwaanka: Töölönlahdenkatu 1
Talo-bixinta Chat Finnish | Iswidish | Ingiriis
diiwaangelinta xaqa joogitaanka dalka, haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah
Adeegga waxaa qeyb ka ah Helsinki-info, Magaalada Espoo, Xafiiska diiwaangelinta Uusimaa, Hoggaanka socdaalka, Maamulka canshuuraha, Kelada, Xafiiska shaqada ee Uusimaa, Xarunta ammaanka hawlgabka, Rugta Ganacisga soonaha Helsinki iyo Ururka Midowga Iskaashatooyinka xirfadleyda Finland SAK.
Shaqaale ka tirsan xafiisyada shaqada (työ- ja elinkeinotoimisto) ayaa kula sameynaya sahan-horaadka (alkukartoitus) iyo qorshaha la-qabshada (kotoutumissuunnitelma), marka aad shaqo raadiye isu diwaangeliso. Xafiisyada Shaqada iyo dhaqaalaha ee Pasila iyo Itäkeskus waxey sameynayaa sahan-horaad. Haddii aad geleyso sahan-horaadka, waa inaad cinwaanka te-palveluit.fi isaga diiwaangelisaa sidii qof shaqo doon ah. Internetka ayaad isaga soo diiwaangelin kartaa haddii aad heysato aqoonsiyada bankiga ee finnishka. Sidoo kale, waxaad iska diiwaangelin kartaa Xafiiska shaqada.
Goobta shaqada ee Itäkeskus
Cinwaanka: Asiakkaankatu 3 A, dabaqa 4aad
Tel: 0295 025 500
Waqtiyada uu furanyahay: Isniin- Jimco saacadda 9.00–16.00
Goobta shaqada ee Pasila
Cinwaanka: Ratapihantie 7 (waxaa laga soo galaa dhinaca Veturitori)
Waaxda arrimaha dadka dal soo galeedka
Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka magaalada Helsinki waxay ka caawisaa dadka qaxootiga ah ee dagan Helsinki la qabsiga. Adeegyada ay bixiso qaybta Soogalootigu waxay yihiin sida hagida, la talinta iyo samaynta qaybta hore ee jihaynta. Qaybta Soogalootigu waxay sidoo kale caawisaa dhibanayaashii dadka ka ganacsada dadka.
Haddii aadan shaqo raadineyn, laakiin aad dooneyso in laguu sameeyo sahan-horaad iyo qorshaha laqabsashada, la xiriir Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka ee magaalada Helsinki.
Macluumaadyada xiririka ee Waaxda ajnabiga:
Telefoonka talobixinta hawlaha sooshaalka (09) 310 37 577 Isniin-Jimco saacadda 8.15-16
Waaxda arrimaha dadka dal soo galeedka ahFinnish | Iswidish | Ingiriis
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: La-qabsashada Finland.
Haddii aadan aqoonin Finnisha ama Iswidish waad isticmaali kartaa turjubaan marka aad arrimahaada ka fushaneysid saraakiisha xafiisyada.
Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro waxaad turjubaan ka heli kartaa sarkaalka. Markaas turjumaaddu adiga waa ku lacag la'aan. Waxaad horay u sii weydiin kartaa sarkaalka arrinta qaabilsan ama talo-bixinta socdaalka ee magaalada Helsinki. Tusaale ahaan Kelada iyo Xafiiska dal u soo guuristu (Maahanmuuttovirasto) waxay turjubaan u dalbaan macaamiisha marka xaaladaha qaar lagu jiro.
Waxaad isticmaali kartaa turjubaan markasta haddii aad adigu bixineyso lacagta turjubaanka islamarkaasna aad dalbaneyso.
Shirkado kale ayaa sidoo kale bixiya adeegga turjumista. Shirkadahan waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan mashiinka wax raadinta ee internetka. Bogga Ururka turjubaanada Finland waxaa ku jira mashiin wax raadin kaas oo aad ku raadsan karto turjubaano.
Adeegyada xarunta turjubaanada soonaha Helsinki waxaa marka ugu horeysa loogu talogalay saraakiisha la shaqeeya dadka dalka u soo guuray.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Ma u baahan tahay turjubaan?
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 14.05.2019 Boggan war-celin ka soo dir